शान्ति र स्थिरता आर्थिक विकासका आधार - Karobar National Economic Daily
शान्ति र स्थिरता आर्थिक विकासका आधार
query_builderJune 18, 2017 11:41 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility721
आस्फओ डिङगामो कामे नेपालका लागि इथियोपियाका गैरआवासीय राजदूत
नेपालको हालसम्म १ सय ४५ वटा मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको छ । यसै क्रममा नेपाल तथा संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियाबीच सन् १९७१ अप्रिल १४ (अर्थात् २०२८ वैशाख २) मा कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको हो । तर, हालसम्म नेपालमा इथियोपियाको राजदूतावास छैन । साथै द्विदेशीय व्यापार पनि धेरै उल्लेख्य देखिँदैन ।
व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार नेपालले इथियोपियाबाट सन् २०१६ मा करिब २५ करोड ८१ लाखभन्दा बढीको वस्तु आयात गरेको थियो भने करिब २ लाख ६० हजार रुपैयाँबराबरको वस्तु निर्यात पनि गरेको थियो ।
नेपालजस्तै कृषिप्रधान तथा पर्यटनमा आधारित अर्थतन्त्र भएको इथियोपिया अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका अनुसार विश्वको तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्रमध्ये पहिलो नम्बरमा पर्छ तथा नेपाल तेस्रो तीव्र गतिमा बढिरहेको अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो ।
नेपाल तथा इथियोपिया दुवै पहाडी भूभाग धेरै भएका भूपरिवेष्टित मुलुक हुन् । इथियोपियाबाट नेपालले धेरै सिक्न सक्ने इथियोपियाका तर्फबाट नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत आस्फओ डिङगामो कामे बताउँछन् । कामेसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
तपाईंको यसपटक नेपाल भ्रमणको उद्देश्य के हो ?
म संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र इथियोपियाको नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत हुँ । म दिल्लीमा बस्छु, तर पछिल्लो तीन वर्षमा यो मेरो तेस्रो भ्रमण हो । यसपटकको मेरो भ्रमण भने महŒवपूर्ण छ ।
किनकि यसपटक हामी काठमाडौंमा अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न गइरहेका छौं । दिल्लीबाट काठमाडांै हेरिरहेको सन्दर्भमा हामीलाई काठमाडौंमै अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्न अत्यन्त आवश्यक लागेको छ ।
नेपालमा अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालय खोल्ने आवश्यकता कसरी महसुस भयो ?
नेपालसँग इथियोपियाको कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसिएको हुनाले हामीलाई द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विषय तथा कूटनीतिक रूपमा असल सम्बन्ध राख्दै अगाडि बढ्न काठमाडौंमै कार्यालय खोल्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको हो ।
यद्यपि हामी दुवै देश बहुपक्षीय विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा एक–अर्कासँग सहकार्य गरेरै अगाडि बढिरहेका छौं । हामी दुवै राष्ट्र वर्षौंदेखि एक–अर्कासँग असल तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धकै आधारमा चलिरहेका छौं ।
तर, कार्यालय स्थापनासँगै यो सम्बन्ध झन् नजिकबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो अनुमान छ । यसबाट हामी दुवै भूपरिवेष्टित मुलुकलाई एक–अर्कासँग नागरिकको तहमा सम्पर्क बढाउन मद्दत पुग्छ ।
नेपाल तथा इथियोपियाले पर्यटन, द्विदेशीय व्यापारजस्ता क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावना कति छ ?
हामी दुवै विकासशील राष्ट्र भएकाले हामी दुवैसँग एक–अर्कासँग सिक्ने तथा एक–अर्कालाई सिकाउने थुप्रै कुरा छन् । नेपालमा धेरै पुराताŒिवक सम्पदाहरू छन्, जसका कारण नेपालमा धेरै पर्यटक आउने गरेका छन् ।
यस्तै, धेरै ठूलो संख्यामा विदेश घुम्न जाने नेपालीहरू पनि बढिरहेका छन् । यसबाट हामी सिक्न सक्छौं । यस्तै, दुवै देशले एक–अर्काबाट सिक्ने धेरै कुरा छन् । इथियोपियामा नेपालमा झैं युनेस्कोमा दर्ता भएका १० वटा पुराताŒिवक स्मारकहरू छन्, जसमा वर्षभरि नै धेरै पर्यटकका साथै अध्ययनका लागि वैज्ञानिक, इतिहासकार एवं विद्वानहरू पनि आउँछन् ।
यसैले सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण छ । इथियोपियाले नेपालसँग सांस्कृतिक तथा पर्यटनको सम्झौता पनि गर्न चाहिरहेको छ, जसका कारण दुवै देशले यसबाट पर्याप्त फाइदा लिन सकून् । साथै, इथियोपियाले नेपालसँग कूटनीतिक तथा दौत्य सम्बन्ध अघि बढाउन सम्झौता गर्ने योजना पनि बनाइरहेको छ । इथियोपिया कृषिप्रधान मुलुक हो ।
हामी कृषिप्रधान मुलुकबाट उद्योग तथा उत्पादनमूलक अर्थतन्त्र बनाउनतिर लागिरहेका छौं । यसबाट पनि नेपालले धेरै सिक्न सक्छ । भविष्यमा द्विपक्षीय व्यापार पनि फस्टाउने प्रशस्त सम्भावना छ । काठमाडौंमा स्थापना हुने अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालयले कूटनीतिक तथा नागरिकबीचमा सम्बन्ध विस्तार मात्र गर्दैन, वाणिज्य सम्बन्ध बढाउन पनि काम गर्नेछ ।
इथियोपियामा हाम्रा आफ्नै विशेषतायुक्त उत्पादनहरू, जस्तै— कफी छ । साथै, हामी विश्वमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्ने मामिलामा पनि काम गरिरहेका छौं । साथै नेपाल पनि यसैमा काम गरिरहेकाले हाम्रा दुई देशबीचको बढ्दो सम्बन्धले सहकार्यमा थप बल मिल्ने आशा छ ।
नेपालले इथियोपियाबाट के सिक्न सक्छ ?
८० भन्दा बढी जनाजाति भएको इथियोपियाबाट नेपालले कृषिका प्राक्टिस, नागरिकको वीरता, सौर्यता तथा सामाजिक सद्भावजस्ता कुरा सिक्न सक्छ । साथै, इथियोपियामा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न संविधानमा भएको व्यवस्थाजस्ता कुरा पनि नेपालले सिक्न सक्छ । नेपालजस्तै इथियोपिया पनि बहुभाषिक, बहुसंस्कृतिक देश हो, जसबाट नेपालले राम्रा उदाहरणहरू सिक्न सक्छ ।
पछिल्ला समय इथियोपियाको अर्थतन्त्रले राम्रो सुधार गरेको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार कसरी सम्भव भयो ?
इथियोपिया र नेपाल दुवै विश्वका १० तीव्र रूपमा विकास भइरहेका अर्थतन्त्र भएका मुलुक हुन् । इथियोपियाको आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम छन्, जसले गत १४ वर्षदेखि अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत गरेको छ । नेपालले पनि विकासको बाटोमा अगाडि बढ्न सुरु गरेको छ । इथियोपियाको दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको अनुभव नेपालले पनि सिक्न सक्छ ।
इथियोपियाको अर्थतन्त्र सुधार गर्न कसरी सम्भव भयो ?
इथियोपियामा मात्र होइन, कुनै पनि देशको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार शान्ति तथा स्थिरता हो । इथियोपियाले विगत २० वर्षमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्न सकेको छ । दोस्रो, कानुनको शासनको प्रत्याभूति हो जसमा इथियोपिया सफल भएको छ । त्यसपछि तेस्रोमा इथियोपियाले आर्थिक वृद्धिका नीति तथा कार्यक्रम, निजी क्षेत्रको विकस तथा वैदेशिक लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गरेको छ । विधिको प्रजातन्त्रीकरण, निरन्तर सुधार तथा समावेशी प्रजातन्त्रका कारण इथियोपियाले आर्थिक विकासमा फड्को मारेको हो ।
आर्थिक विकासका क्रममा इथियोपियन एयरलाइन्स विश्वमा नै विस्तार भैरहेको छ ? के चाँडै नेपाल पनि आउँदै छ ?
हो, हामी चाँडै नेपाल उडान गर्ने सोचिरहेका छौं । हाल इथियोपियन एयरलाइन्स नयाँ दिल्लीसम्म उडान भइरहेको छ । केही समयअगाडि इथियोपियन एयरकार्गो काठमाडौं आएको थियो । त्यसैले यसमा छलफल चलिरहेको छ र छिटै सम्झौता हुन्छ ।
इथियाेपियाबाट नेपालमा लगानी अाउने कत्तिकाे सम्भावना छ?
नेपालका लागि इथियोपियाका गैरआवासीय राजदूततत्काल त्यस्तो सम्भावना देखिन्न । किनकि इथियोपियनहरू आफंै अहिले उन्नति गर्दै छन् । तर, भविष्यमा भने त्यस्तो सम्भावना देखिन्छ । अबको ७–८ वर्षमा इथियोपिया मध्यमआयको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारीमा रहेकाले हाल इथियोपियामा तीव्र औद्योगीकरणको लहर चलिरहेको छ ।
गिरी इथियोपियाका अवैतनिक वाणिज्यदूत
इथियोपियाका लागि नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतमा राजेन्द्र गिरी नियुक्त भएका छन् । इथियोपियाले नेपालका लागि अवैतनिक वाणिज्यदूतको कार्यालय कालिकास्थान, काठमाडौंमा बुधबार स्थापना गरेको छ । साथै, गिरीलाई अवैतनिक वाणिज्यदूतमा नियुक्त भएको पत्र पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले दिइसकेको छ ।
गिरी नियुक्त भएको अवसरमा राजधानीमा बुधबार एक समारोह पनि आयोजना भएको थियो । कार्यक्रममा गिरीले नेपाल र इथियोपियाबीचको व्यापार, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि आफूले पहल गर्ने बताए । उक्त कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री गणेश शाहले गिरीलाई नेपाल र इथियोपियाको सम्बन्ध प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्न शुभेच्छा व्यक्त गरे ।
साथै, इथियोपियाका तर्फबाट नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूत आस्फओ डिङगामो कामेले दुई देशबीच व्यापार, पर्यटनका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले नवनियुक्त अवैतनिक वाणिज्यदूत गिरीलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना पनि दिए ।
अर्थतन्त्र इथियोपिया संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र द्विदेशीय व्यापार